ရေ … ရေ … ရေ ပေးပါ | Layma's World
« အိမ်ပြန်ချိန်များ သို့… သူငယ်ချင်း ( ၂ ) »
ညိမ်းညို, on August 10, 2008 at 9:43 pm said:
အသင့်အတင့်နှလုံးသွင်းတတ်တဲ့ အစ်မကြီး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေဗျာ..။
MhawSayar, on August 10, 2008 at 9:47 pm said:
“အသက်ကြီးလာလေ… သတ္တိနည်းလာလေ… အတ္တကြီးလာလေ…ကိုယ့်ကိုယ်ကို ချစ်တတ်လာလေပဲ”
အများစုကိုတော့ ကျွန်တော်လည်း အဲဒီလိုပဲ ထင်တယ်ဗျာ.။ ကိုယ်တိုင်တော့ အဲဒီလို မဖြစ်အောင် အဲဒါရဲ့ လုံးလုံး ဆန့်ကျင်ဘက် တရားကို ရှာနိုင်မှ တစ်ကယ့် ငြိမ်းချမ်းမှု ကိုရနိုင်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဗျို့. 🙂
ဝေလေး, on August 10, 2008 at 10:44 pm said:
အသက်ကြီးလာလေ… သတ္တိနည်းလာလေ… အတ္တကြီးလာလေ… ကိုယ့်ကိုယ်ကို ချစ်တတ်လာလေ..
အသက်ကြီးလာလေ… ဆင်ခြင်တုံတရား ပြည့်ဝလာလေ… တွေးခေါ်စဉ်းစားတတ်လာလေ … အရာရာကို နားလည်ပေးနိုင်ဖို့ … တရားနဲ့ ဖြေနိုင်အောင် ကြိုးစားတတ်လာလေ..
သားကြွက်, on August 11, 2008 at 1:17 am said:
ရေ …ဆိုတာ ဥပမာပေးထားတာလားး အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ သိသလိုလို မသိလိုလိုနဲ့မသိ တသိပေါ့ 🙂 သိပ်မပေါက်ပြန်ဘူး ဒီအဒေါ်ကြီး အထာနဲ့အားကြီးရေးတယ် သားတို့ က တုံးပါတယ်ဆို 😛
nyo, on August 11, 2008 at 7:34 am said:
တွံတွေးကို ကျိတ်မှိတ်မျိုချတဲ့သူတွေများနေတာတော့ အသေအချာပေါ့..
အဲဒီအထဲမှာ ညိုလည်းပါနေတယ်..း(
မျှားပြာ, on August 11, 2008 at 8:43 am said:
water water !
မင်းကျန်စစ်, on August 11, 2008 at 12:18 pm said:
အင်း… ဘယ်လိုပြောရမလဲ ….
အာ.. သိတော့ဘူး 😛
PMG Alpine နှစ်ဘူးလုံးပေးခဲ့တယ် 😀
ShwunMi_ရွှန်းမီ, on August 11, 2008 at 2:51 pm said:
လူဆိုတာ အသက်ကြီးလာလေ… သတ္တိနည်းလာလေ… အတ္တကြီးလာလေ… ကိုယ့်ကိုယ်ကို ချစ်တတ်လာလေပဲ… ဟုမှတ်ယူရမည်လား… အသက်ကြီးလာလေ… ဆင်ခြင်တုံတရား ပြည့်ဝလာလေ… တွေးခေါ်စဉ်းစားတတ်လာလေ … အရာရာကို နားလည်ပေးနိုင်ဖို့ … တရားနဲ့ ဖြေနိုင်အောင် ကြိုးစားတတ်လာလေ လို့ ပဲ… မှတ်ယူလိုက်ရမလား … ကျွန်တော် မဝေခွဲတတ်ပါ …။ ကျွန်တော် မသိပါ …။
မသိဘူး မလေးမရယ်.. အခုတော့ မီ မွန်းနေတယ်။
အဲဒီတုန်းက ကျောင်းအုပ်ကြီးနဲ့ ကျောင်းသားကြီးတွေ ဘယ်ရောက်ကုန်သလဲ?
soemoe, on August 11, 2008 at 9:48 pm said:
nu-san, on August 15, 2008 at 10:56 pm said:
လေးမရေ.. သေချာနဲ့ ၂ ခေါက်တိတိဖတ်သွားတယ်။ နောက်ဆုံးစာပိုဒ်လေး သဘောကျတယ်။ အခုတော့ ရေရဖို့ မတောင်းဆိုကြတော့ပဲ ရေကြည်ရာ မြက်နုရာဆိုသလို ရေရှိတဲ့ဆီကိုပဲ ပြောင်းရွှေ့ကုန်ကြပြီနော်.. ဘာလိုဆက်ပြောရမလဲတောင် မသိတော့ပါဘူး ညီမရယ်.. 😦
nhn, on August 19, 2008 at 7:32 am said:
ဖတ်ပြီးတာတော့ ကြာပြီဗျာ…ဖွင့်ဆိုရှင်းပြတဲ့ နေရာမှာ မကျွမ်းကျင်လို့ ဘာရေးရမှန်း မသိလို့ ခုမှရေးတာ…ကောင်းတယ်ဗျာ…နောက်လည်း ထပ်ရေးပါ…ဒါမျိုးလေးတွေ….ကျန်းမာပါစေ